Ndichitarisa kumashure ku Super Bowl LV inopesana, zvinozivikanwa kune vazhinji kuti maChief aive nesimba pamusoro pevaBuccaneers. Zvisinei, vazhinji vakashamisika pakangoridzwa muridzo wekutanga kwekota yekutanga.
Iyo Tom Brady-Rob Gronkowski kubatana kwakaratidza kuyedzwa kwenguva. Vaviri veterans vanga vari mumoto mukati mehafu yekutanga yemutambo, vachibatanidza maviri-ehafu-touch touchs yemutambo kuti ivhare ne 21-3 mamakisi pazororo. Chikamu chekuvhura chakauya mushure mechinangwa chebindu neKansas City uye ndokurekodha 75-yadhi kutyaira neBuccaneers. Kubata kwakatevera kwakatevera apo maChief vakaita zvikanganiso zvekuzvidzivirira, kusanganisira chirango chechina-uye 5 chinangwa chekuyedza chakapa Bucs kutanga pasi. Kubudirira murango iwoyo roketi inopfuura naBrady kuenda kuGronk munzvimbo yekupedzisira kechipiri.
Chakashungurudza maChivhosi marango akawanda muhafu yekutanga, izvo zvakanyanya kuitika mumasekondi ekupedzisira ehafu yepiri. Izvi zvinosanganisira zvirango zviviri zvinokanganiswa neMadzishe pane imwe-yadhi mutsara naBrady vachiisa mari pane imwe ine mamakisi ekupfuura kuna Antonio Brown.
Iwo mumwe mugumo wemitambo, Tampa Bay, yakashaya hunyanzvi hwekuzvidzivirira. Kunyangwe Patrick Mahomes airatidzika kunge akagwinya musati mutambo wacho, haana kuratidza kusimba kwake mumutambo wese. Havana kutanga hafu yepiri vaine chivimbo futi. Ivo vanongoshandura mapoinzi kuburikidza nechinangwa chemunda. Izvi zvakapindurwa neimwe Buccaneers kubata pasi sezvo Leonard Fournette akapedza 27-mayadhi eiyo Bucs kutanga kumhanyisa kubata pasi kutambanudza kwavo kutungamira ku28-9. Mushure mekubatwa kwaPatrick Mahomes, Tampa Bay yakasiya mapoinzi zvakare. Ryan Succop akawana 52-yadhi munda chinangwa, achiwedzera iwo mutungamiriri kusvika 31-9. Ichi chaive chimwe chezvishamiso zvikuru zveSupp Bowl LV, ichisiya maKansas City Chiefs asina kubatika pakupera kwemutambo.
Kana iwe ukatarisa iyo Super Bowl MVP inopesana, iwe uchaona kuti Tom Brady ari pakati pevanofarira kuti vakunde. Chokwadi chakakwana, akatakura mubairo pamwe nezvinyorwa zvakawanda pasi pebhandi rake. Akatumidzwa zita rekuti Super Bowl MVP kechishanu mushure mekubatsira timu yake kutungamira ku31-9 kuputika, achipedza makumi maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe ekupfuura kwemayadhi 21, matatu ekubata pasi, uye zero turnovers. Izvi zvega zvinoratidza kukura kwaanogona kuve iye kana iye ari pamusoro pemutambo wake.
Brady akatangazve hukama hwake neNew England Patriots waaibata naye Rob Gronkowski kwemakadhi ake maviri ekutanga pamberi pekubata kuna Antonio Brown nguva pfupi isati yasvika. Apa ndipo apo maBucs akaisa mucherechedzo kuhwina kwavo neChiefs Iyo 21-6 lead yaive yatove isingabatike panguva iyoyo.
Zvakare, Brady atove akabata rekodhi yeSupp Bowl MVPs mushure mekupfuura Joe Montana nemukombe wake wechina paakarova maAtlanta Falcons achitambira iyo New England Patriots.
Hapana ukama mbiru.